के तपाईको छिनछिनमै बिर्सने बानी छ ? अब यसो गर्नुस् « Npnews
के तपाईको छिनछिनमै बिर्सने बानी छ ? अब यसो गर्नुस्
एजेन्सी । मानव जीवनमा धेरैलाई छिनछिनमै बिसर्ने बानी हुन्छ । त्यसले धेरै काम गर्न कठिनाई उत्पन्न गर्छ । समय पनि खेर जान्छ ।
हारवर्ड मेडिकल स्कुलमा गरिएको एक अध्ययनमा मानिसको सम्झिने क्षमता कमजोर हुनु सामान्य कुरा भएको पत्ता लागेको छ । यस्तो समस्यामा कुनै पनि उमेरका मानिसले समयमै ध्यान दिन सके छुटकारा पाइने बताइएको छ ।
जान्नुस् कुन तरिकाबाट यादहरुलाई हरेक उमेरमा ताजा बनाएर राख्न सक्छ:
– अध्ययन भन्छ शारीरिक स्वास्थ्य र दिमागी स्वास्थ्य दुबै सँगसँगै काम गर्छन् । यस्तोमा यदि सम्झिने स्मरण शक्ति कायम राख्ने हो भने हरेक दिन कसरत गर्नुस् । तर, शोधकर्ताले कति समय कसरत गर्ने भनेर भनेका छैन् जसले दिमाग स्वस्थ रहोस् । मात्र एक निश्चित समयका लागि हरेक दिन गर्न भनिएको छ ।
– मैकअर्थरको अध्ययन भन्छन् निरन्तर सिकाई गर्दा लामो समयसम्म सम्झना कायम रहन्छ । यसका लागि केही न केही पढ्नुपर्छ । जस्तै पुस्तक, पत्रपत्रिका । हरेक दिन आसपास हुने घटनाहरुको जानकार हुनुस् ।
– अध्ययन भन्छ चुरोट पिउने मानिसले अरुको नाम र अनुहारलाई चाँडै भुल्छन् । चुरोट पिउँदा सिधा सम्बन्ध तनाव(टेन्सन)सँग हुन्छ जसले सम्झने शक्तिमा ह्रास ल्याउँछ । यसका साथै तनावले स्ट्रोक र हाइपरटेन्शनका खतरालाई दोब्बर पार्छ । जो स्मरण शक्तिका लागि खतरनाक हो ।
– स्वस्थ आहार(खाना)ले दिमागलाई तन्दुरुस्त राख्छ । फलफूल र हरियो तरकारिको अत्यधिक प्रयोग गर्नुस् । फाइदा हुनेछ ।
– अध्ययन भन्छ रातिको निन्द्रा ६ देखि ८ घण्टा शरीरका लागि पर्याप्त हुन्छ । यो दिमागका लागि जरुरी छ । यसले सम्झना ताजै राख्न मद्दत गर्छ ।
– भिटामिन सी, ई र बीटा कैरोटिनको गोली(औषधि) खाँदै हुनुहुन्छ भने यो यादलाई ताजै राख्न महत्वपूर्ण छ ।
– बुढो होस् या कुनैपनि उमेरको होस्, सामाजिक सहयोग एकदमै जरुरी छ कुनै पनि विकासमा । यादहरु र दिमागी स्वास्थ्य पनि यसैसँग जोडिएका हुन्छन् । साथी, नातेदार र शुभचिन्तकसँग भेटघाट तथा बस्दा यादलाई बोलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
@स्वास्थ्य दैनिक नेपाल बाट